Bahda warbaahinta gobolka Mudug oo ka tacsiyeeyay wariyayaashii lagu waxyeelay magaaladda Muqdisho baaqna ka soo saaray. – Radio Daljir
Seteembar 22, 2012 6:26 b 0
Gaalkacyo, Sep 22- Kulan ballaaran oo maant oo taariikhdu tahay 22-Sep-2012 ay isugu yimaadeen wariyayaasha ka shaqeeya hay’adaha warbaahinta ee gobolka Mudug ayay tacsi ka dib waxay baaq u direen dawladda Soomaaliya,hay’adaha QM,kuwa caalamigaa iyo kuwa maxaligaaba inay gargaaraan caafimaad u fidiyaan saxafiyiintii ku dhaawacmay qaraxii habeen hore ka dhacay aga-gaarka guriga hooyooyinka.
Saxafiyiinta ayaa si isku mida u cambaareeyay qaraxyadii ay ku dhinteen 3 wariye kuna dhaawacmeen 4 kale kuwaasoo ka mid ahaa saxafiyiinta warbaahinta dawladda iyo kuwa madaxa bannaan,sidoo kale jimcihii shalay isla Muqdisho lagu dilay wariye ka tirsanaa idaacadda radio Maanta oo dhawaan laga hir-galiyay caasimadda.
Ugu horayn waxaa kulanka ka hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Nusoj Burhaan Axmed Daahir waxaana uu si kulul u cambaareeyay kooxihii ka danbeeyay dilalkii macna darada ahaa ee lagu dilay laguna dhaawacay xirfad-layda warbaahinta Soomaaliya, Burhaan ayaa saxafiyiinta ku booriyay inay dhabar adayg muujiyaan oo ay halkooda ka sii wadaan dadaalka dheerigaa ee ay u hayaan dalkooda.
Cawil Maxamuud Cabdi agaasimaha radio Gaalkacyo ayaa isaguna dawlada Soomaaliya ugu baaqay inay baaritaano la hubo ku samayso cid walboo lug ku leh falkaasi arxan daradaa, Cawil ayaa tilmaamay inay ka xunyihiin dalalka soo laab-laabtay ee lala eeganayo adeegayaasha bulshada Soomaaliyeed.
C/risaq Cali Cabdi (Silver) k/simaha agaasimaha daljir Gaalkacyo oo ka mid ahaa xubnihii soo qaban-qaabiyay kulankan ayaa QM,hay’adaha caalamigaa,kuwa maxaligaa iyo shacabka Soomaaliyeedba ugu baaqay inay gar-gaar deg-dega u fidiyaan saxafiyiintii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay agagaarka guriga hooyooyinka, waxaana uu dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka codsaday in gacan bani-aadantinimo loo fidiyo saxafiyiintiis aan waxba galabsan, Silver ayaa ugu danbayntii talo ahaan u soo jeediyay in la dhawro xaqa saxafiga.
Kulankan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 20 saxafi oo isaga kala yimid waqooyiga iyo koonfurta Gaalkacyo ayaa la isku afgartay in laga shaqeeyo mid-nimada iyo wada shaqaynta qaybaha warbaahinta gobolka.